Umthandazo wokwahlula Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
La umthandazo wokwahlula ekuqaleni yayijolise eSan Alejo; Ingasebenza kwiimeko apho usapho, uzinzo ngokweemvakalelo, okanye nayiphi na enye into ebomini bakho iphenjelelwa ngomnye umntu. Abantu banezizathu ezahlukeneyo zokuba benze lomthandazo; Ukuba ufuna ukufumana yonke into malunga nesi sihloko, ungathandabuzi ukuqhubeka nokufunda inqaku esinalo namhlanje.
Eyona nto ibhetele Umthandazo wokwahlula abantu ababini
1 Uthini umthandazo wokwahlula?
2 Iindidi zezivakalisi
2.1 Ngaba zikhona ezinye iindlela eziqhelekileyo zokuthandaza?
3 Iintlobo zezivakalisi zokwahlula
3.1 Umthandazo wokwahlula ezimbini
3.2 Gxotha umntu uye eSan Alejo
3.3 Umthandazo wokwahlula abathandi
3.4 Ukuxhokonxa umlo wabantu ababini
Uthini umthandazo wokwahlula?
Ngaphambi kokuya ngokupheleleyo kwisihloko esiphambili seli nqaku, kubalulekile ukuba sicacise ezinye iinkcazo. Kwindawo yokuqala, umthandazo unokwaziwa njengomthandazo, le yintsingiselo enikwa kwinkolo (nokuba ithetha ngantoni), ukuze ummeli ophetheyo enze isithethe esivame ukuvela, ngenjongo Ukucela okanye ukucenga umntu othile ongcwele okanye ongcwele; Inokuba yiyo nayiphi na into emele inkolo yakho.
Iiglosari ezahlukeneyo beziphethe ngokunika inkcazo kwigama elithi »umthandazo»; emva koko kuthiwa yindlela umntu angathetha ngayo ngengqondo okanye ngomlomo kwisidalwa esingcwele, kwaye ngokubanzi kuyenzeka xa benqwenela ukwenza izicelo okanye izicelo. Iindlela owenziwa ngazo umthandazo zinokwahluka, kuxhomekeke kwinkolo nakwisiko elenziwa, enye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele ngulo mntu okanye ingcwele oza kwenza isicelo.
Ukuba ufuna ukubeka umthandazo wokwahlulaInto yokuqala ekufuneka uyazi kukuba kukho iindlela ezahlukeneyo zokwenza. Ke, kuxhomekeke kwinjongo onayo engqondweni, ungasebenzisa eyona ilungele imeko yakho kunye nesiko ofuna ukulwenza.
Emva koko, sichaza iintlobo zemithandazo, ukuze ukhethe owona uthandwayo:
Okomlomo: Oku kwenzeka amaxesha amaninzi, ezinkonzweni xa, umzekelo, uBawo wethu ethandazwa kwaye sizinikezela kuThixo.
Ngokucamngca: Oku kufezekiswa amaxesha ngamaxesha, ngokufunda. Inokuvela kwibhayibhile okanye nakuphi na ukufundwa kokomoya apho ufuna ukwenza ezona zicelo zakho zibalulekileyo, eyona nto ifanelekileyo malunga nesi sihloko kukuba into oyenzayo, yiba nokholo olukhulu.
Ngokunikela: Zivela xa umthandazo umiselwe ukufumana isibonelelo esithile kwaye kutshintshiselana ngalo mnikelo othile unikiwe, nokuba kungokwasemzimbeni okanye nangomthandazo womlomo.
Ngengqondo: Oku kwenzeka ngokubanzi xa abantu besiza ukwenza isiko kwaye ezingqondweni zabo bahlala bephindaphinda isivakalisi okanye ibinzana elibalulekileyo kwinkolo yabo.
Ngokucamngca: Kulula kakhulu ukufezekisa, kufuneka ujonge kwaye uthande umfanekiso onawo ophambi kwakho. Amaxesha amaninzi olu hlobo lomthandazo lukhatshwa kukucamngca; Ngale ndlela, yonke imbeko kunye nokunconywa okuvakalayo kumzobo obonwayo kuyaboniswa.
Yezicelo: Le mithandazo yenye yezona zixhaphakileyo, ngakumbi kwindawo yamaKatolika. Xa befuna ukwenza isicelo, banikela ingqalelo yabo epheleleyo emthandazweni ukufezekisa iziphumo abazifunayo, banokude banikeze izinto njengotshintsho.
Ngaba zikhona ezinye iindlela eziqhelekileyo zokuthandaza?
Ewe, abo bakhankanywe kwicandelo elidlulileyo zezinye zezona zisetyenziswa kakhulu ngabalandeli beenkolo ezahlukeneyo. Ngesi sizathu, siyaqhubeka nokuchaza ezinye:
Umbulelo: Ngumthandazo owenziwayo, uhlala usenziwa kumsitho njengomboniso wokuxabisa konke okuhle okuthe kwafunyanwa ngonyaka.
Njengophakathi: Ngokubanzi, olu hlobo lwemithandazo luyenziwa, xa abantu besenza izicelo zabanye abantu, inokuba lusapho, izihlobo, abantu obaqhelileyo okanye nawuphi na omnye umxholo.
Inguquko: Oku kwenzeka ngokubanzi xa umntu ecinga ngokuba nosizi kwimeko ethile. Ukongeza, ibonisa ukuba uzimisele ukugxila ngakumbi kwinkolo.
Iindumiso: Zisetyenziswa kakhulu ezicaweni, ngeengoma, ukubonisa ukuthanda uThixo.
Ezinye zezinto ezingasetyenziswanga ngolu hlobo: ukumamela, ukubhala, ukwamkela okanye ukuphakamisa nokushiya.
Nokuba yeyiphi na ifomu, apho ukhetha ukwenza umthandazo wakho, kubalulekile ukuba ucace gca malunga nendawo ekufuneka ubenayo kunye nobuzaza. Eyona nto ibaluleke kakhulu, zonke ezi ntlobo zomthandazo zikhankanyiweyo zinokusetyenziswa ngaxeshanye, oko kukuthi, ukuba ukhetha isenzi, unokucamngca, njl.
Iintlobo zezivakalisi zokwahlula
Ngoku, nje ukuba sicacise ulwazi ngokubanzi ngesihloko sesivakalisi, siza kukhankanya ezinye zeendlela onokufikelela kuzo ngokwahlukeneyo abantu ababini nangaphezulu:
Umthandazo wokwahlula ezimbini
Olu hlobo lomthandazo lusebenza ngokugqibeleleyo kwimeko yomhlobo okanye umntu omqhelileyo, nayo, inokusetyenziswa ukwahlula ubudlelwane apho kukho ulwazi malunga neenjongo ezimbi zabanye abantu. Inamandla amakhulu kangangokuba inako ukuphelisa umtshato.
Gxotha umntu uye eSan Alejo
Umthandazo weSanta Alejo unamandla amakhulu, okwahlulahlula okanye ukwahlula umntu ongasamfuniyo ebomini bakho, oku kunokuba ngenxa yeemeko ezahlukeneyo eziye zavela phakathi kwenu nobabini.
Umthandazo wokwahlula abathandi
Esi sigwebo sijolise kwabo bantu baqinisekile ukuba amaqabane abo akathembeki. Kungekudala emva kokuyisebenzisa, loo mntu wesithathu uya kuba engekho ebomini babo.
Ukuxhokonxa umlo wabantu ababini
Oku kunokusetyenziswa kuyo nayiphi na imeko ebomini, apho unxibelelwano lwabantu ababini lukukhathaza. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo, isizathu sokuba wenze lo mthandazo, uyasebenza ukwahlula abahlobo okanye izibini ngokunjalo.
Ukuba uluthandile lonke ulwazi esilushiyelayo kweli nqaku, kubalulekile ukuba uqhubeke usazi malunga nesi sihloko kwaye sicebisa ukuba ufunde Umthandazo wabantwana abanemvukelo. Ukongeza, sikushiya ividiyo, apho unokufumana ngakumbi.